Miyaad Garanaysaan Qofka Ka Danbeeya Ololaha Eedaynta David De Gea, Waa Iker Casillas-Jose Mourinho Oo Soo Celiyay Colaadii Casillas. - GOOL24.NET
Miyaad Garanaysaan Qofka Ka Danbeeya Ololaha Eedaynta David De Gea, Waa Iker Casillas-Jose Mourinho Oo Soo Celiyay Colaadii Casillas.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ka soo gudbay xuduudii Premier League iyo kooxdiisa Manchester United wuxuuna gaadhay goobo ay colaado badani ku soo dhex mareen kabtankiisii hore ee Real madrid ee Iker Casillas kaas oo uu ku eedeeyay in uu yahay shaqsiga ka danbeeya ololaha eedaynta ee David De Gea.
Baryihii ugu danbeeyay saxaafada Spain ayaa culays wayn saartay David De Gea kadib markii uu koobkii aduunka ku soo fashilmay isla markaana uu xulka qaranka Spain guuldarooyin kala kulmay England iyo Croatia isla markaana ay ka hadheen UEFA Nations League.
Jose Mourinho ayaa soo celiyay colaadii waynayd ee kala dhexaysay Iker Casillas oo hadda ka tirsan kooxda FC Porto balse dhawaan la muujiyay in loo baahan yahay in uu ku soo laabto xulkiisa Spain si uu De Gea uga soo ceshato booskii goolhayaha kowaad.
Jose Mourinho ayaa ku dooday in Iker Casillas uu doonayo in saamayntiisa saxaafada uu u adeegsado in uu ugu soo laabto goolhayaha xulka Spain balse waxa uu ku dooday in aanu taas hadda awoodi karin.
Waraysi uu Casillas dhawaan bixiyay ayuu ku sheegay in uu ka shanaynayo ama uu ka qoomanaynayo in aanu dagaal la galin Jose Mourinho markii uu kaydka ku qudhmiyay intii ay Real Madird wada joogeen taas oo uu Mourinho iyadana ka jawaabay.
Ugu horayn Mourinho oo hadalkii Casillas ka jawaabaya ayaa yidhi: “Waxay u muuqataa waraysi qof ku jira dhamaadka waayihiisii ciyaareed. Marka ay timaado aniga ee markii uu sheegay in aanu waligii aniga dagaal ila galin, ma aha xaqiiqo, isagu waxa uu iila dagaalamay si aanu isaga qofna kaga fiicnayn oo ah si qarsoon”.
Jose Mourinho oo Casillas ku eedaynaya in uu yahay shaqsiga ka danbeeya dhaleecaynta loo soo jeediyay David De Gea ayaa yidhi: “Maxay tahay sababta ay Spain uga jirto eedayntu? Miyaad garanaysaan?. Anigu waan garanayaa”.
Mourinho oo sababta eedaynta De Gea ka danbaysa ka hadlaya ayaa yidhi: “Sababtu waxay tahay waxaa jira qof aad u awood badan kaas oo ka fikiranaya in uu mar labaad ku soo boodo, laakiin waxaan filayaa in ay wax aad u adag tahay in lagu soo boodo marka aad hortaada ku haysato goolhayaha aduunka ugu fiican”.
Hadalka Jose Mourinho ayaa markale cirka ku sii shareeraya colaadii waqtiga dheer kala soo dhexaysay Casillas kaas oo uu ku eedeeyay in uu yahay shaqiga ka danbeeya eedaynta Dea Gea loogu soo jeedinayo Spain isaga oo waliba ku duray in uu saxaafada adeegsanayo.
Jose Mourinho aan aaminsanayn in eedaynta De Gea ay tahay mid ka timid Luis Enrique balse uu saxaafada dhex mariyay Casillas ayaa yidhi: “Maya tababaraha ma aha. Anigu si fiican ayaan u garanayaa tababaraha, laakiin, haa waa saxaafada”.